Suurtagal Su'aalaha Diiwaan Geliyaha Ugu Xun Abid | Martech Zone
Saaka waxaan ka helnaa wicitaan waali ah macmiil. Waxaan la shaqeynay iyaga si aan u horumarinno goob cusub in yar ka dib, laakiin wax walbana waxay ahaayeen kuwo aan khadka ka jirin hadda. Arrin DNS ah nooc ka mid ah. Ninkooda IT-ga ayaa na soo wacay si aan u aragno haddii aan wax beddelnay. Kama aanan ahayn laakiin had iyo jeer waan necbannahay inaan maqalno dhibaatooyinkan oo waxaan dooneynay inaan ka caawinno iyaga inay dhibaatada xalliyaan.
Mararka qaarkood waa wax u fudud sida haysashada kaarka deynta duugga ah ee faylka oo domainku dhacayo. Laakiin waqtiyo kale, waa dhibaato dhab ah diiwaan-hayaha bogga. Xaaladdan oo kale, diiwaan-hayuhu waa Hostgator. Horay ayaan dhibaatooyin ugala kulannay meesha aynaan awoodin inaan wax ka beddelno wax diiwaanno ah oo DNS ah annagoo aan la shaqeynin kooxdooda taageera.
Cusboonaysiin: Markaad la hadlayso taageerada Hostgator maalintii oo dhan, waxay u muuqataa mid ka mid ah arrimaha ugu waaweynaa in Hostgator uusan dhab ahaan diiwaan-gelin domain ahayn. Meelaha ayaa ka diiwaangashan iyada oo loo marayo dhinac saddexaad, Launchpad. Marka, intaad u malaynayso inaad taageero helayso, waxaad runtii lahadlaysaa qof aan gacanta ku hayn wax alla wixii akoontadaada ah.
Waxaan kula talinay macaamiisheenna inay u wareejiyaan domainka GoDaddy halkaas oo aan ka heli karno xakameyn buuxda.
Laakiin subaxaan, dhammaan bogagga ma xallin lahayn. Markii aan sameynay baaritaanka WHOIS, waxaan ogaanay in magaca server-ka la beddelay:
Marka, waxaan soo galnay Hostgator si aan u xaqiijino dejimaha iyo Magaca Adeegyada si habboon loogu dhigay koontada. Waxaan ka codsaday macmiilka inuu u diro wixii emayl ah ee ay ka heleen Hostgator una gudbiyo cinwaanka emaylka ee maamulka diiwaanka. Cinwaanka emaylka ee maamulka waa cinwaan gmail ah oo aysan kormeerin maalin kasta, waa dhaqan guud.
Ka dib markii aan ka aqrinay emayllada 'Hostgator', waxaan helnay mid codsaday in la xaqiijiyo cinwaanka emaylka ee faylka ku jira. Dhaawacani wuxuu noqday arrinta. Maaddaama macmiilku uusan waligiis xaqiijin cinwaanka emaylka ee faylka, Hostgator waxay qaateen naftooda inay u beddelaan Magaca Server-ka NS1.QAAB-QAADINTA- HALKAN.WAA LA JOOJIYAY-DOMAIN.COM
Si daacadnimo ah, weligay ma maqal wax nacasnimo ah noloshayda. Waxaad si macno leh u xireysaa boggaga shirkad iyo emayl markii ay leeyihiin akoon lacag bixin ah?! Waan arki karay haddii aysan bixin biilkooda, laakiin tani waa wax lagu qoslo.
Waxaan dardar galineynaa wareejinta domainka ee Hostgator loona wareejinayo GoDaddy si loo dhammeeyo madax-xanuunadan.
Tags: dnsdiiwaangeliyaha domaindiiwaangelinta domainhoygeyga
Jun 28, 2016 at 1: 52 PM
Miyaan ku wadaagi karaa sheekadaada reddit.com/r/talesfromcallcenters?
Jun 28, 2016 at 1: 54 PM
Adiga ayaa ka badan soo dhaweynta!
Jun 29, 2016 saacadu markay ahayd 8:16 AM
Hayso sheeko la mid ah macmiil kale oo diiwaan-haye kale ah. Waxay codsadeen, emayl ahaan, inay ku xaqiijiyaan cinwaanka iyo cinwaanka maamulka ee cinwaanka. Macaamiilku wuxuu u maleeyay inay tahay spam oo kama jawaabin. Marka waxay ahayd inaan raacno talaabooyinka "lagu furo" koontada. Waxaa lagu xaliyay wax ka yar saacad markii aan ogaanay, laakiin waxaan la yaabanahay haddii tani ay sii kordheyso dhaqanka caadiga ah.
Jun 29, 2016 saacadu markay ahayd 8:24 AM
Runtii waxay ubaahantahay in lajoojiyo. Haddii aan lacag ku bixiyay degelkeyga qofna xaq uma lahan inuu joojiyo ilaa cusbooneysiinta ama aysan jirin nooc xadgudub oo la caddeeyay mooyee.
Jun 29, 2016 at 10: 49 PM
Waxaan u maleynayaa inaan wax ka arkay xeer cusub. Waxaan ku arkay goDaddy xitaa. Hubi e-maylkaaga dadyohow.
Jul 4, 2016 markay ahayd 7:58 AM
Haddii websaydhka wehelkaagu aad muhiim u yahay, maxaad xitaa uga fiirsan lahayd hostgator. Waxaad heshay waxaad bixisay.
Jul 4, 2016 markay tahay 8:05 PM
Shaki kuma jiro. Kani wuxuu ahaa macmiil noo yimid, maanaan dooran Hostgator. Waxaan tan iyo markii aan ka soo haajirnay degelkooda Hostgator una gudbinay diiwaan-haye lagu kalsoonaan karo.